Ny Honor Band 5 dia amidy amin'ny andro voalohany amidy any Sina | Androidsis
Natolotra omaly ny Honor Band 5 fomba ofisialy. Ny brasele hetsika vaovao an'ny marika sinoa, izay nahatonga antsika hanana fiasa vaovao maro. Novana ny famolavolana azy ary mahita andiany fiasa vaovao ihany koa isika. Fiovan'ny andiany izay nantsoina hoe fahombiazana teo amin'ireo mpampiasa rehefa natomboka teny an-tsena.
Raha ny an'i Chine dia efa namidy ity Honor Band 5 ity, misy vokatra tsara. Ny orinasa mihitsy no nanamafy izany Amin'ny andro voalohany amidy dia efa amidy ireo singa Amin'io. Tsy misy isalasalana, fandraisana lehibe nataon'izy ireo tao amin'ny firenena.
Ity dia fanombohana tsara ho an'ny fehin-tànana amin'ny fahatongavany eny an-tsena. Ataovy mazava tsara fa any Shina misy fahalianana amin'ity Honor Band 5 vaovao ity. Mampanantena izy io fa ho lasa fahombiazana vaovao ho an'ny marika eto amin'ny firenena. Ankoatry ny fanehoana ny tenany ho a mpifaninana tsara amin'ny Xiaomi Mi Smartband 4, izay mivarotra be koa.
Tsy mbola voamarina ny fanombohana ny fehin-tànana any Eropa. Talohan'ny nanolorana azy dia afaka nahafantatra ny momba azy izahay rehetra noho ny fivoahana niseho tao Amazon Germany. Hita ao izany any Alemana dia hanomboka amin'ny fomba ofisialy amin'ny 15 Aogositra mankany an-tsena.
Noho izany, azo inoana fa hitovy ny daty nanombohana ity Honor Band 5 any Espana ity. Na dia tsy fantatsika aza raha hitovy ny vidiny Naseho ho an'i Alemana, 59,90 euro. Ity no vidin'ny kinova tsy misy NFC. Tsy fantatsika raha hanomboka any Eropa ny kinova NFC na tsia.
Ka mila miandry ela kokoa vao hahalala raha misy izany na tsia. Mazava izany raha ny momba an'i Sina dia manaitra ny fahalianany ity Honor Band 5 ity, Ka azo antoka fa izy io no ho mpivarotra be indrindra amin'ity volana ity. Ho hitantsika raha miteraka fivarotana tsara ho an'ny marika sinoa ny fandefasana azy any Eropa.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fitaovana Android » Finday » Huawei » Honor Band 5 dia amidy any Shina amin'ny andro voalohany
Ny Vivo Nex 2 dia voamarina tamin'ny fiampangana haingana 44 watt
Ny Xiaomi Mi A3 dia amidy amin'ny fomba ofisialy any Espana